Etu ịhọrọ nke kacha mma Cast Iron Casserole efere
site na nhazi na 20-07-18
Ergonomics N’uche ịghara imehie ihe nlereanya, ọ dị oke mkpa ịmata ụdị nkedo ígwè ịhọrọ. Ọtụtụ atụmatụ na ahịa na-eduhie ọtụtụ ndị mmadụ. N'akụkụ a, anyị ekwesịghị ilekwasị anya na nyocha anyị naanị n'akụkụ nke mpụga nke ụdị ahụ. N'ezie, ndị gbasara ...
Garlic Nwere Ike Inyere Ọgụ Oyi ọgụ
Na Mọnde, anyị kwurịtara maka etu vitamin C dị ukwuu maka sistem oria na etu ọ ga - esi nyere gị aka ịnwe oyi ma ọ bụ flu. Taa, anyị na-elele usoro ọgwụgwọ a na-amachaghị nke ụlọ: garlic. Nne nne ochie ejiri galiki aringụọ iyi maka oyi ruo ọtụtụ iri afọ. Mana, anyị chọrọ ịmụtakwu gbasara ndị…
—Shijiazhuang Kingway Imp. Co., ltd, na-etinyekwu ego n'ọrụ nyocha nke ngwaahịa ọhụrụ A na-emepụta ọhụụ ga-abụ ọhụụ na arụ ọrụ ndị ọzọ. Usoro usoro nkedo a ọhụrụ ga - abụ agba ọhụrụ na nha karịa maka nhọrọ ndị ahịa. Ihe a na-ajụ